XOG: Qoor Qoor oo Weji cusub ula soo baxay Farmaajo & Qorshaha Shirka Dh/mareeb | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA XOG: Qoor Qoor oo Weji cusub ula soo baxay Farmaajo & Qorshaha...
XOG: Qoor Qoor oo Weji cusub ula soo baxay Farmaajo & Qorshaha Shirka Dh/mareeb
Ayada oo la filayo in madaxweyne Farmaajo uu berri tago shirka Dhuusomareeb, ayaa waxaan weli kala caddeyn cidda hoggaamin doonta shirka oo ay marti-gelisay Galmudug, sida ay ilowareedyo lagu kalsoon yahay sheegeen.
Xubno ka tirsan madaxtooyada Galmudug ayaa sheegay in Villa Somalia ay xiriir lasoo sameysay kana dalbatay in shirka hoggaamintiisa lagu soo wareejiyo, oo madaxweynaha dalka uu hago, hase yeeshee Galmudug ay ku gacan seertay dalabkaas.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku dooday inaysan ahayn wax sharci iyo caqli gal ah in madaxweynaha Soomaaliya uu marti ka noqdo dal uu dhammaantiisa hoggaamiyo, ama uusan hoos tagi karin maamul uu hoggaamiyo, sidaas darteedna ay lagama maamrmaan tahay in Galmudug soo wareejiso hoggaanka shirka.
Dhanka kale Galmudug ayaa ku dooday in qaar ka mid ah maamullada dalka, gaar ahaan Jubaland iyo Puntland ay xasaasiyad ka qabaan Villa Somalia, taasina ay ahayd sababtii markii hore keentay in shirka Galmudug ay mart-geliso, sidaas darteed aysan waxba ka beddeli karin martigelinta shirka.
“Annaga waan caddeynay, haddii madaxweynaha lagu qanacsan yahay markii horeba shirka laguma qabteyn Dhuusamareeb, ee waxaa la tagi lahaa Muqdisho, marka ma dhici karto inaan taas aqbalno,” ayuu yiri sarkaal ka tirsan madaxtooyada Galmudug oo codsaday inaan la magacaabin.
Si kastaba, Ilo-wareedyo ka tirsan Villa Somalia ayaa sheegay inay ku rajo weyn yihiin in Galmudug bedesho mowqifkeeda marka madaxweynaha uu tago Dhuusamareeb, mana cadda sida xaaladda ay ku dambeyn doonto.
Dhana kale, madaxweyne Farmaajo ayaa loo diyaariyey lana dejin doonaa xarunta madaxtooyada Galmudug, oo ah goobta uu shirka ka dhacayo, waxaana ammaankiisa sugaya ku dhowaad 200 oo askari oo koofiya cas ah oo Xamar laga keenay.
Previous articleFarmaajo oo maanta ku wajahan Dhuusamareeb
Next articleXOG:Farmaajo oo diiday in Cabdi Xaashi uu ka qeyb galo shirka Dhuusamareeb
Sheekh Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur oo Go’aan laga gaaray in u tartami karo doorashada Koofur Galbeed
Dhageyso:-Taliyaha Xoogga Oo Sheegay Inay Ka Hor Tagayaan Dad Ka Ganacsatada….
Warbaahinta Dowlada oo lagu daabacay Qoraal hadal heyn badan abuuray !!
Masar iyo Itoobiya oo si lama filaan ah sare ugu qaaday rajada aqoonsi ee Somaliland
DEG DEG: Toogasho ka dhacday Magaalada Gaalkacyo…
DHAGEYSO: Cumar C/rashiid Oo Kashifay Khaladkii Farmaajo & Kheyre
Hogaamiyaha mucaaradka Dalka Turkiga oo weerar culus lagu qaaday Kadib Markii Uu
RW Rooble: “Waxaa naga go’an badqabka Suxufiyiinta & xogsiintooda xaqa ay u leeyihiin”.
XOG:Gadiidka Gaadhaaman ee Qatar keentay oo wax laga siinaayo labo maamul goboleed dowlada xiriir la leh
Dhageyso: Yaa Weeye Siyaasiga Xanaaqsan?Yaa kamid ah shaqsiyaadkaas”